Halkaas hadii aad iga taabato wax badan ayaan dareemayaa” | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Halkaas hadii aad iga taabato wax badan ayaan dareemayaa”
Halkaas hadii aad iga taabato wax badan ayaan dareemayaa”
Wednesday, January 17, 2018 Bulshada
Bulsha:- Qoraal ay iyo Sawir ay Jowhar Fm soo gaarsiisay Gabdh sheegtay in ay tahay Gabadh Somaliyeed ayaa u qornaa sida tan.
Magaceyga waa Xabiibo waxaan Joogaa Magaalada Gaalkacyo ,waxaan idiinka codsanayaa in aad qoraalkan oo aan waxba laga jarin aad soo saartaan Pagge-kiina ,waana ii muhiim ,Mahad gaar ah ayaana idiin kagahayaa
Dad badan ayaa lagayaabaa in ay isweydiiyaan Talow qoftan Maxey tahay? Hadaba looma baahna in aad igu mashquusho laakiin waxaan Ognahay in qof walba oo bani’aadam ah uu kacsi ka dareemo meelo kala duwan ,ragana ay jecel xubno kala duwan oo dumarka ku yaala.
Hadaba aniga meeshan uu Ninkan gacanta ku hayo waa Meesha uu dareenkeyga sida aad-ka ah uu ugu kaco ,waxaana dareemaa hadii xitaa maro yar iga taabato xan-xanto saa id aha laakiin ragow Malaga yaabaa in uu jiro qof naaska ka jecel Xubinta kale ee dumarka.
Hadaa Gaalkacya ayaan joogaa laba bil kadib Safar Kampalla ah ayaan gali doonaa ii baashaa ciddii I daneynesana waxaan Contactiga ugu reebayaa bahda busho.